Blooming Isku Laabashada - Joornaalka Naqshadeynta
Isku Laabashada Naqshadeynta dharka indhaha ee Sonja waxaa dhiirrigeliyey ubaxyo ubaxyo ah iyo meelo hore oo muuqaal ah. Isku-darka qaababka dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo unugyada shaqeynaya ee muuqaalka muuqaalka naqshadeeyuhu wuxuu sameeyay shay la beddeli karo oo si fudud loogu maamuli karo bixinta dhowr muuqaal oo kala duwan. Badeecada ayaa sidoo kale loogu talagalay inay suurtogal noqoto laab laab ahaan wax ku ool ah, iyadoo booska ugu badan ee suurtogalka ah ku qaadanaysa boorsooyinka xamuulka. Muraayadaha indhaha waxaa laga soo saaray "lex-cut plexiglass" oo leh daabacado ubaxyo ah oo loo yaqaan 'Orchid', oo xirmooyinka waxaa lagu sameeyay gacanteeda iyadoo la isticmaalayo 18 dahab oo naxaas ah.
Magaca mashruuca : Blooming, Magaca naqshadeeyayaasha : Sonja Iglic, Magaca macmiilka : Sonja Iglic.
Isku Laabashada Sonja Iglic Blooming